Mapato ezveMatongerwo eNyika Okurudzirwa Kumisa Mhirizhonga Pamberi peSarudzo dzeMwedzi Uno
Kurume 10, 2022
Mhirizhonga yezvematongerwo enyika inonzi iri kunyanya kuitika pakati pemapato eCitizens Coalition for Change neZanu PF.
Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika vanoti havashamiswi nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mugadziriro yesarudzo dzema by-election dziri kuitwa musi wa 26 mwedzi uno, vachiti mhirizhonga inhaka yagara iri muvana veZimbabwe kubva munguva yehondo yerusunguko.
Mapato ezvematongerwo enyika gumi nematanhatu ari kupinda musarudzo dzemwedzi uno dzeparamende pamwe nedzemakanzuru, asi mapato matatu anoti Zanu PF, Citizens Coalition for Change (CCC) neMDC-T inotungamirirwa naVaDouglas Mwonzora ndiwo ari kunyanya kunongedzana achipumhana mhosva yekukonzeresa mhirizhonga iyi.
Vebato reCCC vanoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nenhengo dzeZanu PF, izvo zvakazosvitsa pakutora hupenyu hweimwe nhengo yebato iri, VaMboneni Ncube, pamhirizhonga yakaitika kuKwekwe.
Imba yeimwe nhengo yebato reCCC inonzi yakapiswa kuBindura mukupera kwesvondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF musuhure mekunge yaita musangano masikati nenhengo dzebato rayo.
Mapurisa haasi kusiiwawo munyaya yemhirizhonga iyi, sezvo ari kupomerwawo mhosva yekutarisa rutivi panenge pachiitika mhirizhonga, kana kutarisa kuti munhu abuda mumba maani mukuita basa ravo panyaya dzine chekuita nemhirizhonga.
Ukuwo, mapato eZanu PF neMDC-T yaVaMwonzora ari kunakurirawo mhosva yekukonzera mhirizhonga iyi kubato reCCC.
Nemusi weChitatu, mutungamiri werimwe remapato ari kupinda musarudzo idzi reLEAD, Muzvare Linda Masarira, avo vari kukwikwidza musarudzo yevamiriri veparamende, vakazivisa kuti vakanga vanyorera tsamba vatungamiri vemamwe mapato gumi nemashanu achakwikwidza mwedzi uno.
Muzvare Masarira vanoti vari kukurudzira vatungamiri ava kuti vazvipire kupedza mhirizhonga uye kuchengetedza chizvarwa cheZimbabwe chose, zvisineyi nekuti chinotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei?
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCentre for Natural Resource Governance, VaFarai Maguwu, vanoti nekuda kwekuti mhirizhonga iri muropa revana veZimbabwe, hurumende painodadzira kuti sarudzo dzave kuitwa, inenge ichichoti chipondanayi.
VaMaguwu vanoti bato riri kutonga reZanu PF rinofanirwa kutambira kuti munyika mune mutemo unobvumidza mapato ezvematongerwo enyika akawanda, rogamuchira kuti simba rinogona kupihwa nevanhu, simba rinogona kutorwa nevanhu, roudza nhengo dzaro kuti dzimire mhirizhonga.
Asi nhengo yeboka revechidiki muZanu PF, VaAlex Gakanje vanoramba kuti mhirizhonga munyika yakatanga munguva yehondo yeChimurenga, vachiti mhirizhonga yakauya nevachena pavakapinda munyika kunopamba ivhu.
VaGakanje vanoti bato reCCC ndiro rinokonzeresa mhirizhonga munyika, vachiti ivo vakatotumirwa mashoko ekuvatyisidzira vachinzi vachaitwa zvakaitika kune dzimwe nhengo dzebato ravo kuBulawayo.
Vanoti dambudziko iri rinopera manje manje kana paramende yakapasisa mutemo wePrivate Voluntary Organisation Bill, uyo wavanoti uchaita kuti masangano akazvimirira akaita seraVaMaguwu azive paanofanirwa kumira chaipo, orega zvekupindira mune zvematongerwo enyika achisimudza mhirizhinga kuti awane zvekunyora.
Hurukuro naVaAlex Gakanje pamwe naVaFarai Maguwu